Isisindo somzimba phantsi kolawulo lwe-thyroid gland, ubale iikhalori, ulalele iigleke, utyumle iifatate kunye neengxube zomlomo, kunye nokugqithisa komzimba kusekhona? Mhlawumbi ukubonakala kwamakhilogremu angaphezulu kudibaniswa ne-glitches kwi-thyroid gland. Umphumo wenkqubo ye-endocrine kwisisindo somzimba, izifo zayo kunye neempawu zondlobo phantsi kweemeko, siya kuthetha. Ukusebenza ngokuqhelekileyo kwe-thyroid gland kuyinto evamile kubo bonke abantu.
Ziziphi izifo zesifo se-thyroid eziqhelekileyo?
Ezi zifo ezizimele - xa i-immune system iqonda iiseli ze-thyroid zangaphandle. Ngenxa yoko - ukuvuvukala kwi-thyroid gland. Inokuhamba kunye ne- hypothyroidism (isifo se-Graves-Bazedov) okanye i-hyperthyroidism (isifo sikaHashimoto). Nge-hypothyroidism, i-thyroid gland ivelisa amahomoni anganeleyo, nge-hyperthyroidism-kakhulu. Enye inkokeli yonyuka kwi-thyroid gland (goiter) kunye nokwakhiwa kweendawo. EUkraine, iindidi eziqhelekileyo ze-goiter ziyaxilongwa, i-autoimmune thyroiditis efanayo kwaye, ke, umdlavuza we-thyroid.
Yintoni echaphazela impilo ye-thyroid gland?
Ukwanda kwendlela ye-thyroid igxininiswa kukunqongophala kwe-iodine ekudleni. Ukungathinteli kakubi lo mzimba kunye neminye imichiza (umzekelo, imiselwe ukonyango lweengxaki zengqondo kunye neentlanzi). Umdlavuza we-Thyroid unokuhlakulela ngenxa yerilation of the neck area, ingakumbi ebuntwaneni. Eyokuqala - ukuzalwa. Izifo ezithatha ngokuzenzekelayo ze-thyroid gland zisasazwa ngodidi lomfazi. Musa ukulibala malunga neemeko zethu. EUkraine, ukwanda kokuphazamiseka kwinkqubo ye-endocrine kudibene ne-ecological poor and accident Chernobyl. Ukuchaphazela kakubi le ntsimbi ye-cigarette yomsila-iqukethe izinto eziyingozi ze-hydroxypyridines. Ugcina umsebenzi we-thyroid gland kunye nomxholo okwandisiweyo we-lithium emanzini.
Ingxaki ye-thyroid gland ithintela njani ubunzima bomntu?
Ukungabikho kwe-hormone ye-thyroid kubangela ukwanda komzimba. Nge-hypothyroidism, umzimba usebenzisa amandla angaphantsi - izondlo ezitholakalayo ngokutya zifakwe kwiishuphu ezinamafutha. Umsebenzi wezintso unzima. Oku kubangela ukuvuvukala ubuso kunye nemilenze. Ukunyuka komzimba okwehla, kukho ukukhathala okukhawulezayo. Konke oku kuncedisa kwisethi yamapounds angaphezulu. Nge hyperthyroidism, i-metabolism emzimbeni iyasebenza - kwaye ubunzima bulahleka ngokukhawuleza. Isifo esinjalo sichaphazela kakhulu intliziyo kunye nokujikeleza kwegazi, kubangela ukuhlaziywa kwezihlunu kunye namathambo. Izifo ezingakhange zihambisane nezinguqu kummandla osebenzayo we-thyroid gland ngokuqhelekileyo azikhokelela ekutshintsheni komzimba.
Ngaba ndingakwazi ukulahlekelwa isisindo kunye nesidlo kule meko?
Xa i-hypothyroidism kunzima ukulahleka isisindo - i-metabolism emzimbeni iyancipha. Kufuneka ukuba ulungele izinga le-hormone ye-thyroid ngoncedo lwamachiza. Xa uphatha nge-hormone kubalulekile ukubeka iliso rhoqo kwiimpawu zazo kwigazi ukuze utshintshe umlinganiselo wezilwanyana ngexesha elifanelekileyo. Ukutya kuya kuba nzima. Njengomgaqo, ukulungiswa kwe-hormonal state kuyimfuneko phantsi kolawulo lwe-endocrinologist.
Ungadla njani, ukuze ugcine usebenze ngokuqhelekileyo kwe-thyroid gland - kwaye ugcine umlinganiselo?
Kufuneka udle ukutya kunye nomxholo ophezulu we-iodine: iintlanzi zaselwandle, i-shellfish nezinye ivenkile. Ungasebenzisa ityuwa e-iodidi, izongezo zokutya ezifanelekileyo. Kodwa ukuba isifo se-thyroid sele sisekhona, ukutya ukutya okuphezulu kwi-iodine, ngokuchaseneyo, akukhuthazwa. Abantu abanjalo kufuneka badibane nogqirha ophetheyo-malunga nesondlo kunye nezondlo zokutya. Ungakulibali ukuba kubalulekile ukutya imifuno eninzi, izithelo kunye nemveliso yobisi. Ayikho into ebalulekileyo-into efanelekileyo, ekhuthaza ukutyalwa kwezondlo.
Ngo-hypothyroidism, unyango lulawula izinga lama-hormone e-thyroid. Ukukhipha i-hyperthyroidism, i-thyreostatics isetyenziswa. La mayeza athatyathwa ngeenyanga eziliqela, kuba anokunyusa ukwanda kwe-thyroid, kwaye ngamanye amaxesha unokuchaphazela kakubi inkqubo ye-hematopoiesis kunye nomsebenzi wesibindi. I-Hyperthyroidism iphathwa ngonyango lwe-radioiodine: isigulane sisegumbini elivaliweyo kwaye lifumana iifomsile zomsakazo. KwiSibhedlele saseYunivesithi yaseFreburg, isebe elivaliweyo linamawadi angama-15. Iodine ye-radioactive eqokelelwa kwiiseli ze-thyroid ibonisa i-beta kunye ne-gamma imisebe kwi-gland yonke, kwaye iiseli zayo kunye neeseli ze-tumor ezisasaze ngaphaya kwazo ziyachithwa. Kuphela iiseli zegciwane le-thyroid ziyaxiliswa - iodow ye-radioactive iyabandakanywa kuphela. Imeko yelungu iqheleke kwiiveki ezimbalwa emva kokunyanga kwe-radioiodine.
Funda kwakhona: uyilo lokulala kunye negumbi lokulala kwigumbi elinye
I-Roses kunye neinyembezi: zonke malunga neentyantyambo eziqhambileyo
Ubude bokulala komntu omdala
Izifo ezithintekayo ngesondo
Iinyawo ezinamahloni zilimaza imilenze yakho
Ama-Syndromes kunye neempawu zezifo zangaphakathi
U-Stepan Menchikov e-Instagram wagqiba amahemuhemu ukuba akayena ubaba we-biological of the eldest son
Iibhonsi kunye ne-guava ne-cream cream
Unyango lwezonyango zomntu we-sinusitis
Uyazi njani ikusasa lakho ngomhla wokuzalwa?
Iinkonzo zokugqiba: ulonwabo aluhambisani
Iipropati eziwusizo zenyama, intlanzi, izidlo zezilwanyana zaselwandle kwimpilo
Inkukhu i-skewers neyinaninate